Voters threatened to vote for the USDP in Pegu Division and told roads would be built if USDP wins (ပဲခူးတစ်နေရာတွင် မဲပေးသူများကို ကြံ့ဖွံ့အား မဲပေးရန်ခြိမ်းခြောက်ပြီး၊ ကြံ့ဖွံ့ အနိုင်ရရှိပါက လမ်းများဖောက်ပေးမည်ဟုဆို) | Burma Election Tracker
Voters threatened to vote for the USDP in Pegu Division and told roads would be built if USDP wins (ပဲခူးတစ်နေရာတွင် မဲပေးသူများကို ကြံ့ဖွံ့အား မဲပေးရန်ခြိမ်းခြောက်ပြီး၊ ကြံ့ဖွံ့ အနိုင်ရရှိပါက လမ်းများဖောက်ပေးမည်ဟုဆို) Posted in citizen
A voter in Pegu Division said: "I did hear about election. I sawabrochure on my fence. There were lion logo and rice branch logo on them. I returned home and voted. Not that I felt glad but like duty that I had to complete. There were more USDP members persuading voters. They were telling people to vote for them. Guards included firefighters and other officers. Polling station was at the primary school. There wereafair number of voters. There of my family member voted. My grandpa voted for the rice branch (NUP). There are no positive outcomes from voting for the lion (USDP). If we vote for rice brand (NUP) maybe it will be good for farmers. Voters were threatened that they would be arrested if they didn’t vote for USDP and promised that roads would be built if USDP won. WPDC senior officers collected household registration and ID numbers. For me, I did not cast advance vote. Teachers had to cast advance votes 3-4 days ahead of the election. There was no partition where people voted. It was not private." “ရွေးကောက်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်းကို သတင်းကြားပါတယ်။ လက်ကမ်းစာစောင်တွေကို ခြံစည်းရိုးတံကားမှာ ညှပ်ထားခဲ့တယ်။ ခြင်္သေ့တံဆိပ်နှင့် စပါးနှံတံဆိပ်တို့ ဖြစ်တယ်။ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ မဲပေးခဲ့တယ်။ မဲပေးတဲ့အချိန် ပျော်တယ်မဟုတ်ဘူး။ တာဝန်တခုလိုပဲ စိတ်မှာ ခံစားရတယ်။ မဲသွားမထည့်တဲ့လူတွေလဲ ပြီးနေတာပါ။ စောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ်။ မဲဆွယ်တဲ့အဖွဲ့က ခြင်္သေ့အဖွဲ့ပဲများတယ်။ ခြင်င်္သေ့ကို မဲထည့်ပေးပါလို့ ဒီလိုမျိုးပြောတယ်။ မီးသတ်တွေ၊ ဆယ်အိမ်မှူးတွေက လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေတယ်။ မဲရုံးကတော့ ရွာမူလတန်းကျောင်းမှာ မဲရုံးထောင်တယ်။ မဲပေးတဲ့လူတွေက အသင့်တင့်ပေါ့..။ ကျမတို့ မိသားစုထဲမှာ ၃ ဦးမဲပေးရတယ်။ အဖိုးကတော့ စပါးနှံကို မဲထည့်ခဲ့တယ်။ ခြင်္သေ့ကိုပေးရင် ဘာမှရမှာ မဟုတ်။ စပါးနှံထည့်လိုက်ရင် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ကောင်းတယ်။ ခြင်္သေ့အဖွဲ့ကို မထည့်ရင်ဖမ်းမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။ ခြင်္သေ့နိုင်ရင် ကတ်တရားလမ်းခင်းပေးမယ်လို့ သူတို့ပြောတယ်။ ရယကလူကြီးတွေ အိမ်မှာ အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်အမှတ် စာရင်းလာယူသွားတယ်။ ကျမကတော့ ကြိုတင်မဲ မထည့်ပေးဘူး။ ဆရာဆရာမတွေက ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင် ၃-၄ရက်မှာ USDP အတွက် ကြိုတင်မဲတွေ ပေးရတယ်။ မဲခြစ်တဲ့နေရာမှာ ဘာမှမကားထားဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့။” ပဲခူးတိုင်းရှိ မဲပေးသူတစ်ဦးမှပြောသည်။